★မြန်မာ့အလင်း★: ရွေးကောက်ပွဲ ၂ ပတ်အလိုမှာ တာဝန်သိကြပါ
ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး နီးပါးကေ၇ွးကောက်ပွဲ အပေါ်မှာ လုံးဝကို အယုံအကြည်မရှိပါဘူး။ စိတ်လဲ မ၀င်စားပါဘူး။ မတတ်သာလို့ မဲပေးရရင် ကြံ့ဖွတ်ကို မဲမပေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားတွေ ရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တာဝန်သိတဲ့ လူငယ်တွေက နည်မျိုးစုံနဲ့ သက်စွန့်စံဖျား ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးတွေကို လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ယခုအခြေအနေတိုင်းဆိုရင် မဲပေးသူနည်းပါးခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေမှာပါ။ မသက်သာလို့ မေးရရင်လည်း ကြံ့ဖွတ်အစား တခြားပါတီကိုသာ မဲပေးမှုတွေကြောင့်. . ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ၄ နှစ်လုံးလုံး ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ကိုင်ရမယ့် အခြေအနေကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်အောင် မဖျက်နိုင်ရင် . . . . ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ စစ်အဏာရှင်တွေရဲ့ အဏာတည်မြဲရေးကို ဆူးညှောင့် ခလုတ် ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးကြပါစို့။
ကျုပ်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ။ ကျေးဇူးကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ကလိမ်ကကျစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အဏာတည်မြဲနေတရွေ့ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့လို တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် သူတွေဟာ အသက်ကြီးပြီး ထောင်ထဲမှာပဲ သေသွားရမယ့် အနေအထား မျိုးပါ။ သူတို့တွေဟာ ကျုပ်တို့ ကောင်းစားရေးအတွက် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခဲ့သူတွေပါ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ သူတို့တွေ ပြန်လွတ်လာအောင် မိမိတတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေ လုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ပဲ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့အပေါ် စာနာစိတ်မရှိပဲ တိုင်းပြည်အရေးဟာ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ တာဝန်မဲ့တဲ့ စိတ်ထားမျိုးကိန်းအောင်းနေရင် … ကျုပ်တို့တွေဟာ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ တန်းတူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူးကို သိဖို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ လမ်းတွေ တံတားတွေကို လက်ညှိးထိုးပြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ တချို့လူတွေကလဲ ပါးစပ်က ထုတ်မပြောပေမယ့် အဲဒီ တံတားတွေဟာ နအဖကြောင့်လိုထင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေကို အထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်။ တကယ်တမ်း အဲဒီလမ်းတွေ တံတားတွေကို လက်ညှိးထိုးပြီး ဂုဏ်ယူရမယ့်သူ တွေဟာ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ ကျောင်းသား အုပ်စုသာဖြစ်ပါတယ်။ (ကုလား မြအေးသည် ၈၈ မှာ ကျောင်းသား မဟုတ်တော့ပါ။ မြအေး ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ကုလားတွေက လိမ်ထားခြင်းဖြစ်သည်) မဆလခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဦးရှုမောင်ဟာ မိန်းမပွေရှုပ်ပြီး တိုင်းပြည်အရေးကို ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သံယံဇာတပေါကြွယ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ မဆလ ဆက်လက်ပြီး အဏာတည်မြဲနေရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယားထက်တောင် အခြေအနေဆိုးသွား နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုအခြေနေမှာ ၈၈တုံးက ကျောင်းသား လူငယ်တွေက တာဝန်သိစွာနဲ့ မဆလကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့ မဆလပြုတ်ကြသွားခဲ့တယ်။ နအဖရဲ့ အခြေအနေက မဆလလို ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလို့ မရတော့ဘူး။ လူထုကို မလေး မစား မလုပ်ရဲတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါ့ကြောင့် အဏာမြဲဖို့အတွက် သေနတ်ကိုမသုံးပဲ ဒီမိုကရေစီ ရအောင် ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုပြီး လိမ်ညာကြတယ်။ လူထုကို မျက်နှာချိုသွေးတဲ့အနေနဲ့ တံတားတွေဆောက်.. လမ်းတွေဖေါက်ပေး ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ကို ကြောက်လန့်ပြီး တံတားတွေဆောက် လမ်းတွေဖေါက် ခဲ့တာကို . . . . စစ်တပ်က ဂုဏ်ယူရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကလိမ်ကကျစ် ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဖြဲချောက်နိုင်တဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်တုိ့ အဖွဲ့က ဂုဏ်ယူရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား? လမ်းတံတားတွေကို မြင်တိုင်း အစစ်အမှန် ကျေးဇူးရှင်ဟာ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ အုပ်စုဖြစ်ကြောင်း သတိထားကြပါ။ ကျုပ်တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ သူတို့ကို ပြန်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်ပြီး စစ်သားတွေကိုလဲ ပြောချင်ပါတယ်။ မဆလသာ ဆက်လက်ပြီး အဏာမြဲနေရင် MIG-29 ကို သုံးနှိင်တဲ့ အနေအထားရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို ခေတ်မှီလက်နက်တွေနဲ့ ဂုဏ်ရှိတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်လာတာ ၈၈ ရဲ့ တော်လှန်ရေးကြောင့် . . . မဆလ ပြုတ်ကျသွားခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေဆိုတာ သိထားကြပါ။ အခုအဏာရနေတဲ့ ကလိမ်ကကျစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ မဆလကို ဖြုတ်ချရဲတဲ့ သတ္တိုမရှိခဲ့ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ပွဲလန့်တုံးဖျာခင်းတဲ့ အချောင်သမား အဏာရူးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျား စိတ်ဓါတ်နဲ့ လေးစားထိုက်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒင်းတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ဆိုရင် ဦးရှုမောင် နောက်ထပ် မိန်းမ ဆယ်ယောက်မက ယူပြီးပျော်ပါးခွင့်ရနေမှာပါ။ တကယ်သတ္တိုရှင်တွေဟာ ကျောင်းသားတွေပါ။ မင်းတို့ စစ်တပ်မှာ ခေတ်မှီ လက်နက်တွေ မြင်တိုင်း ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြပါ။ အတည်ပြောနေတာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စကို ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့တွေအနေနဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးကို ပြန်ဆပ်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တရားမျှတမှုအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို တတ်စွမ်းတရွေ့ နှောင့်ယှက်ရမယ်။ ပြည်တွင်းက လူတချို့ဟာ သက်စွန့်စံဖျားလုပ်နေတဲ့ နေချိန်မှာ မပင်မပန်းပဲ အုတ်တစ်ချပဲ သဲတစ်ပွင့်လေးတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့က ပြည်ပမှာနေပြီး ဘာအန္တာရယ်မှမရှိပဲ လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာ တိုင်းပြည်အရေးကို လက်ပိုက်ပြီး မကြည့်သင့်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကို အနှောင့် အယှက်ပေးကြရအောင်။ တာဝန်လေးတွေ သိကြရအောင်။
အချိန်က ၂ ပတ်ပဲလိုတော့တယ်။ ကျုပ်တို့က ဘလော့ သမားတွေပါ။ လက်တွေ့ သမားတွေ မဟုတ်ပဲ ဒီလောက် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ထိရောက်အောင် နှောင့်ယှက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို တင်ပြမယ်။ လက်တွေ့ကျသလားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ လက်တွေ့ကျတယ်လို့ ယူဆရင် . . . အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် လက်တွေ့ကျကျ ကူညီပါလို့ ကြိုတင်လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ဒီ၂ပတ်အတွင်းမှာ လုပ်သင့်တာကတော့ နအဖကျွေးတဲ့ အရိုးအရင်းစားနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုး.. သားသမီးတွေကို ဗီဇာပိတ်ပင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ပြီး အစပျိုးသင့်တယ်။ ကုလားတွေဆိုတာ အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေကို သိပ်ကြိုက်ကြတယ်။ အဲလိုခြိမ်းချောက်လိုက်ရင် နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက အဲဒီ ပလီဆရာတွေကို ကြံ့ဖွတ်အတွက် လုပ်ပေးနေတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အချင်းချင်းပြောဆို နားချမှုတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မြန်မာလူမျိုးအားလုံးက မဲပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင် လူဦးရေ ၁၀% ရှိတဲ့ ကုလားတွေကို အလေးထားဖို့ မလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအနည်းငယ်ကသာ မဲပေးမယ့် အနေအထားမှာ ကုလားတွေရဲ့ မဲအရေအတွက်ဟာ အရမ်းကို သတိထားရမယ့် အနေအထားပါ။ အဲဒီ ၁၀% ကုလားတွေက ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးမယ်ဆိုရင် ကြံ့ဖွတ်အတွက် အရမ်းကို အကျိုးရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပြီး ကြံ့ဖွတ်ကို မဲမပေးတော့ဘူးဆိုရင် . . ကြံ့ဖွတ်ကို နိုင်ငံရေးအရ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေမှာပါ။ ကုလားတွေဟာ ဦးဏှောက် လုံးဝ မရှိဘူး။ ပလီဆရာတွေက ချေးယို သေးပေါက်ကအစ ညွှန်ကြားပြောဆိုနေရတဲ့ အနေအထားပါ။ နိုင်ငံရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေး အစစ အရာရာ ပလီဆရာတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ လုပ်နေရတဲ့သူတွေပါ။ ပလီဆရာတွေဟာ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ အမြဲအဆက်အသွယ် ရှိနေပါတယ်။ ၂ ပတ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ ဘာမှမရှိတော့ပေမယ့်။ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ ကုလားတွေကို ပလီဆရာက ညွှန်ကြားဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။
ဒါဆိုရင် အခုစာဖတ်တဲ့သူက တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ? ဘာမှ မပင်ပန်းပါဘူး။ ခင်ဗျား တစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးရင် တိုင်းပြည်ကြီးကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဘလော့တွေနဲ့ မွတ်ဆလင် ဘလော့တွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ကော်မန့်တွေမှာ နအဖနဲ့ လက်တွဲနေတဲ့ ပလီဆရာတွေရဲ့ ဆွေမျိုး သားသမီးတွေကို ဗီဇာပိတ်ပင်ရေးလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုပေးကြဖို့ပါ။ နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေကို ပြစ်တင် ရှုံ့ချသည့် ဆောင်းပါးများကို ရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ ကော်မန့်ရေးတာဟာ ဘာမှ အပန်းမကြီးပေမယ့်.. ဗီဇာပိတ်ပင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို စတင်စေနိုင်တဲ့ တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျုပ်တို့က မွတ်ဆလင်တွေကို မုံန်းလို့ ပလီဆရာတွေနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေကို ဗီဇာ ပိတ်ပင်ဖို့ ပြောနေသလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်ကို မထားစေချင်ဘူး။ ကျုပ်တို့ဟာ မွတ်ဆလင်ကို မုံန်းသည်ဖြစ်စေ.. ချစ်သည် ဖြစ်စေ . . . အဲဒါက အရေးမကြီးပါဘူး။ ကလိမ်ကကျစ် ဗိုလ်ချုပ်တွေ လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ပံ့ပိုး ကူညီတဲ့သူမှန်သမျှ အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှာပါ။ မြန်မာတွေကို အရေးယူခဲ့သလို ကုလားတွေလဲ အရေးယူခံရမှာပါပဲ။ လူ့စည်းကမ်းကို ဖေါက်ဖျက်တဲ့ ပလီဆရာတွေဟာ တခြားလူတွေလို တန်းတူ အပြစ်ပေးတာခံရမှာပဲ။ ကျုပ်တို့ စိတ်ထားက အရေးမကြီးဘူး . . . . ပလီဆရာတွေ အပြစ်လုပ်ရင် အပြစ်ပေးခံရမယ်။ အပြစ်ပေးမခံချင်ရင် အပြစ်မလုပ်နဲ့.. ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား? တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ်ကို ဆက်ပြီး အထောက်အကူပြုတဲ့ ပလီဆရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက်စာရင်းသွင်းပြီး သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးအားလုံးကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့အောင် အင်တိုက် အားတိုက် လှုပ်ရှားကြတာပေါ့။ ကဲ.. ဆောင်းပါး ကို သဘောတူရင် ဘလော့တကာကို လှည့်ပြီး ဗီဇာပိတ်ပင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ ကော်မန့်တွေကနေ တောင်းဆိုပေးကြပါ။ နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေကို ပြစ်တင်ရှုံ့ချသည့် ဆောင်းပါးများကို ရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ အချိန် အရမ်းနည်းနေပြီ. . . .. . လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကြပါ။ အချိ်န်မရှိတော့ဘူး . . . . တာဝန်သိကြပါ။ ဘာမှမလဲ အပန်းမကြီးပါဘူး . . . ဘေးကနေ လက်ပိုက်ပြီး ကြည့်မနေပါနဲ့တော့။
ဆက်စပ်သည့် ဆောင်းပါးနှင့် သတင်းများ
★ လိမ်တဲ့ မြအေး
★ “မူဆလင်တွေ လွတ်လပ်ဖို့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကို ထောက်ခံကြ” ဟု ဆိုကာ လွတ်တော် အမတ်လောင်းများက လှည့်လည် စည်းရုံး
★ မောင်တောမြို့နယ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မူဆလင် စီးပွားရေး သမား နှစ်ဦးက ဦးဆောင်မည်
★ ဒုဝန်ကြီး ဖုန်းဆွေ မူဆလင် လူထုကိ်ု စည်းရုံးရန် မောင်တောသို့ ရောက်ရှိ လာပြန်ပြီ
★ ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီး မောင်တော ပလီကြီးကို သွားရောက် လည်ပတ်
★ ဗမာ စစ်အစိုးရ အရာရှိများမှ ဒေသခံ မူဆလင် စီးပွားရေး သမားများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရခိုင်စီးပွားရေး သမားများကို အနိုင်ကျင့်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 11:22 AM
ဒီမို ဘလော့ဂ်တွေက ခင်ဗျားလို ဒါကို ဘာမှ မလုပ်ကြဘူး။ တခါတခါ စိတ်ကုန်လို့ ဘာမှ ပြောချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ခင်ဗျားက တာဝန်သိပါတယ်။ အခု ဒီမိုဘလော့ဂ် တွေက လေသံတောင်မဟဘူးဗျ ။ ခင်ဗျားကသာ အမုန်းခံပြီးအမှန်ကို တာဝန်သိသိပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီမို ဘလော့ဂ်တွေက ကုလားအကြောင်း ဟတောင် မဟဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ က ခင်ဗျားပြောသလို မြန်မာ မြန်မာချင်းသာ ပြောရဲသလို ဖြစ်နေပြီ။ အထင်မကြီး တော့ဘူး။ မင်းကိုနိုင်တို့ ကိုဘဲသနားတော့တယ်။ သူတို့ က ထောင်ထဲမှာ တိုင်းပြည်အတွက် စတေးခံနေတယ်။ ကုလားက ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတာကို မဟကြတော့ ဒီမို ဘလော့ဂ်တွေက ရေးနေတာတွေက အလကားဖြစ်မနေဘူးလား။ နောက်ဆုံးဗျာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးတောင် မြတ်ခိုင်ရဲ့ လျှပ်တပြတ် မှာ အင်းစိန်ထောင်ကြီးအကြောင်းပြောထားတာကို ဝေဖန်ကြသေးတယ်။ ဦးခင်မောင်ဆွေ တို့ လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကြောင့် နှစ်ပြားမတန်တော့ဘူး။ ဒါကို လက်ခံတယ်။ အခု ကုလားတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံတာကိုကြတော့ အားလုံးတစ်လုံးမှ မဟကြဘူးဗျာ။ ဒီတော့ ခင်ဗျားပြောတာတွေက တဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်လာတယ်ဗျ။ အိမ်ကျယ်တွေ ဆိုတာ ပေါ့ဗျာ။ စိတ်လျှော့ပြီးတွေးရင် ခံစားရတယ်ဗျာ။ စိတ်တင်းပြီးတွေးရင် နောက်ဆုံးတော့ တန်ရာတန်ရာ အစိုးရကိုဘဲ ရကြမှာဗျ။ ကုလားတွေ ကိုတောင် မဝေဖန်ရဲမှတော့ စစ်အစိုးရပြုတ်ကျဖို့ တော့ ဒီတသက် မမြင်တော့ဘူးဗျာ။ အကုသိုလ် မဖြစ်အောင်သာ ကိုယ်နိုင်သလောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ကြဖို့ ဘဲရှိတော့တယ်။ ထောင်ထဲက သူတွေဘဲသနားတယ်ဗျာ။ သူတို့ တွေကို အမြန် လွတ်စေချင်လှပြီဗျာ။ သူတို့ ဘ၀တွေကို ထောင်ထဲမှာ ထပ်ပြီး မကုန်ဆုံးစေချင်တော့ပါဘူး။ ကုလားတွေ အကြောင်းကို မဟ တာဟာ ဒီမိုဘလော့ဂ်တွေက အမှန်နဲ့ ဝေးနေကြပြီဗျ။ ဘာမှကိုမဟတာပါဗျာ။ တော်ပြီဗျာ သူတို့ ဒီမို ဘလော့ဂ် တွေကို သိပ်အလေး မထားတော့ပါဘူး။ ဆောရီးဗျာ ကျွန်တော့ ကွန်မန့် အတွက်ပါ။
( ထောင်ထဲက သူတွေဘဲသနားတယ်ဗျာ။ သူတို့ တွေကို အမြန် လွတ်စေချင်လှပြီဗျာ။ သူတို့ ဘ၀တွေကို ထောင်ထဲမှာ ထပ်ပြီး မကုန်ဆုံးစေချင်တော့ပါဘူး။ ကုလားတွေ အကြောင်းကို မဟ တာဟာ ဒီမိုဘလော့ဂ်တွေက အမှန်နဲ့ ဝေးနေကြပြီဗျ။ ဘာမှကိုမဟတာပါဗျာ။ တော်ပြီဗျာ သူတို့ ဒီမို ဘလော့ဂ် တွေကို သိပ်အလေး မထားတော့ပါဘူး။ )
ကျနော်တို့ ဘလော့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာလူမျိုးတွေကို နိုင်ငံရေး စိတ်ပျက်သွားစေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ကုန်သွားစေဖို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတာက ခင်ဗျားရဲ့ စကားဟာ စိတ်ပျက်.. စိတ်ကုန်ဖြစ်သွားတယ်။ ခင်ဗျားဟာ ဦးမင်းကိုနိုင်တုိ့ရဲ့ ကျေးဇူးကို တကယ်သိလား? သူတို့ကို တကယ်လွတ်စေချင်လား? အဲဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား စိတ်ကို အရင်ဆုံးပြန်ထိမ်းပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုလို လက်လျှော့ပြီး ဒီမိုဘလော့တွေ မသွားတော့ဘူး။ မဖတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးဟာ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့အတွက် ဘာမှ မကျိုးမရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားက ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်.. ပြီးတော့ ခင်ဗျား လုပ်စေချင်သလို တခြားလူတွေက မလုပ်တာကို ညည်းညူနေတာကလဲ အဓိပါယ်မရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒီအစား ကော်မန့်တွေကနေ ခင်ဗျားဖြစ်ချင်တာကို တင်ပြပါ။ မိမိနဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ မှားနေတာတွေကို ထောက်ပြပါ။ တစ်ခုတော့ သတိပေးမယ်။ အဲလိုလုပ်ရင်တော့ အဆဲခံရတာတွေ၊ အထေ့အငေါ့တွေတော့ ရင်ဆိုင်ရမယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ပဲ . . လက်မြှောက် အလျှော့ပေးလိုက်ရင် ဦးမင်းကိုနိုင်တို့တွေဟာ ထောင်ထဲမှာ သေတဲ့အထိ နေသွား၇မှာပဲ။ တစ်ခုခုလုပ်ပေးနေရင်တော့ သူတို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ရှိနေမှာပါ။
ပြည်တွင်းမှာ နအဖ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းတွေရှိနေတယ်။ ပွဲလန့်တုံးဖျာခင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ လူကျင့်ဝတ်နဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုတာ မင်းတို့သိပါတယ်။ သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ လူရဲ့ စိတ်ဓါတ် မဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့လို ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကုလားတွေဟာ . . နအဖကို ကူညီပေးနေတဲ့ ကုလားတွေ လုပ်ရပ်ကို မသိဟန်ဆောင် နေတာ မှန်ကန်လား? မင်းတို့ဟာ ဖြောင့်မတ်တဲ့ သူတွေဆိုရင် နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေကို တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက် စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းပြီး . . . . နောက်ဖက်နိုင်ငံတွေကို ၀င်ခွင့် မရအောင် ဗီဇာပိတ်ပင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ကြပါ။ သူတို့ရဲ သားသမီး ဆွေမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့ကြပါ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ဘယ်သူမှ ခိုင်းဖို့မလိုပဲ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့ သူဆိုရင် . . . . . သူ့လူငါ့လူမခွဲခြားပဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ မင်းတို့ မွတ်ဆလင်တွေက ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ဒို့တွေက စောင့်ကြည့်နေတယ်။